Archive du 20200114
Betampona-Fenoarivo Atsinanana Niova tampoka ny anaran’ny ben’ny tanàna
Rakoto Justin dit Ralonga, kandida miaraka amin’ny antoko Tia Tanindrazana tao amin’ny kaominina Betampona Fenoarivo Atsinanana no efa notononin'ny Fitsarana ao Toamasina fa lany ho ben’ny tanàna,
Raveloson Louis de Gonzague « Politikan’ny manam-bola no manjaka eto »
Naneho ny fahitany ny fiainam-pirenena ny mpanao politika, Raveloson Louis de Gonzague ka nilazany ny zava-misy eto Madagasikara amin’izao. T
Fitakiana ny nosy Malagasy Mampitandrina ny Filoham-pirenena ny Pr James Ratsima
Miketrika ny hampanao fitsapan-kevi-bahoaka momba ny fitakiana ireo Nosy Malagasy na îles eparses ny fitondram-panjakana ankehitriny.
Fanjakana Rajoelina Vao mainka tsy atokisan’ny mpamatsy vola
Endrika tsy fangaraharan’ny fitantanana sy fisian’ny fanodinkodinam-bola no niseho tao anatin’ilay raharaha 65000Ar
19 janoary 2020 Tena hamboly hazo fa tsy hitsangantsangana
Zanakazo 60 tapitrisa no efa vonona hovolena ny 19 janoary ho avy izao.
Mbola mitaredretra ihany !
Feno ny fepetra ara-politika ananan’ny fanjakana ankehitriny fahefana hampandroso an’i Madagasikara. Malalaka tamin’ny fisafidianana ny ekipany ny filoha,
Gare routière Fisandratana « Tsy mbola mahafeno ny fepetra », hoy ny ATT
Tsy tontosa indray ny famindrana ireo fiara mpitatitra na taksibrosy miantsona eny amin’ ny Fasan’ny karana ho eny Ambohimanambola.
Oniversite An-dalana ny taona fotsy
Nandray fanapahan-kevitra ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka eto Antananarivo izay nivory omaly teny Ankatso satria efa akaiky ny 15 janoary
Teknolojia vaovao sy avo lenta Hitarafana ny fandrosoan’ny firenena ny fampiasana azy
Amin’izao andron’ny fanatontoloana izao dia tsy azo ihodivirana intsony ny fironana anatin’ny tontolon’ny informatika sy ny teknolojia vaovao.
Tsena iraisampirenena Nihena ny vidin-tsolika
Nahitana fidinana ny vidin-tsolika, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo, teo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Nihena 0,6% hatramin’ny 0,9% izany amin’izao.
Fampianarana teknika Mangataka hisaraka amin’ny minisiteran’ny fanabeazana
Ny velirano faha-4 nataon’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no milaza fa omen-danja bebe kokoa ny fampianarana teknika sy ny arak’asa
Olan’ny mpampianatra Sekoly maro hikatona mandritra ny herinandro
Mbola miantona tanteraka ny fampianarana eny anivon’ireo lisea maro eto an-drenivohitra sy ny manodidina ankehitriny.
Analakely sy ny manodidina Tsy maintsy miala ireo mpivarotra amoron-dalana
Nidina ifotony teny amin’ireo faritra misy mpivarotra amoron-dalana toy ny etsy Tsaralalana sy ny manodidina ireo polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’ny boriborintany voalohany etsy Analakely omaly.
Hofan-trano Niakatra 10 % ny ankamaroany
Fotoana fampiakaran’ny tompon-trano ny hofany ny taona vaovao tahaka izao.
Parking manokana eto an-drenivohitra Tsy mbola nisy nahazo fahazoan-dalana
Namoaka fanambarana mikasika ny mety ho famaritan’ny mponina sasany eto an-drenivohitra ny tobim-piantsonana ho azy manokana ( parking privé) ny teo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.